Iintambo ze-fashionable ze-fashionable-spring-summer 2015
Inwele yebhinqa idla ngokuba yinto ebaluleke kakhulu kumfanekiso wonke. Ngamanye amaxesha, ukutshintsha kuphela iinwele, unokutshintsha konke ukubonakala. Ngokufika kwexesha elitsha, abafazi abaninzi befestile bafuna ukuvuselela ukubonakala kwabo. Yaye indlela eyona ndlela efanelekileyo yokwenza oku kukukwenza i-hairstyle entsha.
Iintlobo zeentlobo zeentlobo zebhinqa - iintwasahlobo-zasehlobo zonyaka
Iintlobo zeentlobo zeentlobo zeentlobo zentombi zentwasahlobo-ehlobo zonyaka ka-2015 - isisombululo kwisisombululo esilula. Njengoko inkosi yobugcisa bezinwele ithi, iingubo zee-styles, eziyizinto eziphezulu kwixesha lexesha, azifani kwiinkathazo, kodwa zinika impembelelo, isitayela kunye nokucocwa.
Iintlanzi ze-Universal zohlobo lwentwasahlobo ka-2015 . Ngokufika kwentwasahlobo, into yokuqala ofuna ukuyenza ifihla ikhabethe elifudumeleyo kwaye ilula. Ukuthabatha ingqungquthela, kufuneka ubeke iinwele zakho zibe yimpuma. Iimpawu zezinwele ezisefestile kakhulu entwasahlobo ka-2015 zithetha ukukhangela kwamahhala, umsila ochanekileyo kunye neengqungquthela eziphathekayo. Izisombululo ezinjengezinto ezibonakala zilula zikhangeleka kakhulu kwaye zihle. Ezi zibopho zezinwele zilula ukwenza ngaphandle kokuthatha inxaxheba kwintloko, kwaye ziyihobise ngazo zombini nomhla nangomsobo .
Iimfashiso zentwasahlobo-ihlobo e-2015 ngeenwele ezinde . Kwixesha elifudumeleyo, umnini weenwele ezinde ufuna ukuzithemba kwaye ukhululekile, kwaye ngexesha elifanayo kubalulekile ukugxininisa ubuhle beengqungquthela zakhe. Iintlanzi eziphezulu kakhulu zefestile zezinwele ezinde kwixesha lonyaka-kahlobo lonyaka we-2015 laliyimsila yentlanzi, ukudibanisa kweekhanda kunye ne-spikelets elula. Ngokutsho koogqirha, ezinjalo iimodeli zidibanisa ngokufanelekileyo ukulungelelana nobuhle.
Uhlobo lwe-Spring-Summer 2015 lwezinwele zeenwele ezimfutshane . Abanikazi beenwele ezimfutshane kubaluleke kakhulu ukuba bahlale besetyhini kunye nobumnene. Ukunikezelwa kwezi mfuno, abachwethethi baye babiza iingubo ezincinci zee-headical zeenwele ezimfutshane kwixesha elitsha entwasahlobo-ehlobo 2015 ezinqabileyo iinwele, i-bulk styling kunye ne-styles kwi-style yase-Chicago yama-1920.
Iingubo zeMfashini - ekwindla-ebusika 2015-2016
Izikhumba zeAnkle 2017 - Iimfashini zeMfashini, iindaba eziNje
I-Valentino Collection - Spring-Ehlobo ngo-2014
Imibala ephathekayo kwiingubo zika-2014
Imijelo esuka kwiplakisi ye-2013
Amabhontshi amaFashion 2014
Indlela yokwenza i-manicure enhle?
Izambatho ezivela kwivelvet ngo-2016
I-Haircuts - Ukuwa 2015
Ingubo ye Spring 2016
Oksana Mukha - ukuqokelela u-2015
Izicathulo eziphathekayo 2014
Izitayela eziphathekayo kwiingubo zika-2014
KwiTongariro National Park
Ihlobo liluhlaza izinto
Ukulungiselela umyezo ebusika
Telepathy ku Abathandi
I-Cathedral yeSingcwele Intliziyo kaYesu
Ukuguqulwa kwamanzi kwiprotheni yobisi lweenkomo
I-Aqua aerobics yokulahleka kwesisindo
Izibhokisi zase Spring
Ioli ye-lavender ebusweni
Indlela yokwenza inhalation?
Imifuno ehluthiweyo ekhaya
I-Gazpacho - iresiphi yeklasi
I-encephalitis ephathekayo kunye ne-borreliosis - iimpawu, ukuxilongwa, unyango
Kara Delevin kunye nentombi yakhe ngo-2015
Ndiyakubambisa iinwele ezimanzi?
Ndingathini ubusuku obuhle kumfana?